တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုတစ်ခုကို ရောင်းဝယ်ပုံ
တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်မတ်လာမှုနှင့်အတူ အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာ
သင်အနှစ်သက်ဆုံး ငွေကြေးအတွဲကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အကျ(bear) ဈေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်သည်ဟု တွေးကြည့်ပါ။ ရုတ်တရက်၊ ဈေးနှုန်းစတင်ပြီး အထက်တက်သွားမည်။ သို့သော် အရမ်းမြန်မြန်ကြီး မရှုပ်ထွေးသွားပါစေနဲ့။ တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်မတ်လာမှုနှင့် သင်ကြုံနေရတာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နေပါဦး၊ မကြောက်ပါနှင့်၊ FBS သည် တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်! ၎င်းသည် ရေတို ပြန်လည်ခြေရာကောက်မှု အမည်များသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် အမှန်တကယ် "သေစေနိုင်သော" အရာဖြစ်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ထိုကဲ့သို့အခြေအနေ အတောအတွင်း ဘယ်လိုရောင်းဝယ်ရမလဲ၊ တကယ့်ဈေးပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုကနေ ထိုခုန်ထွက်မှုတွေကို ဘယ်လိုခွဲမလဲ မသိသည့်အခါမျိုးဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသောပြန်မတ်လာမှုနှင့် ဤကဲ့သို့ဈေးပြောင်းပြန်ကာလအတွင်း ရောင်းဝယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာအကြောင်း ဖွင့်ဆိုချက်များ ထည့်ပေးထားပါသည်။
တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုဆိုတာ ဘာလဲ?
ဤစကားရပ်နောက်က အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်: နှုန်းထားသည် လုံလောက်အောင်လျှင်မြန်နေပါက၊ တိုတောင်းပြီးမထင်ရှားတာတောင်မှ ပြန်မတ်နိုင်သည်။ "တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသောပြန်ခုန်တက်မှု" ဝေါဟာရအား ကြာရှည်သည့် အကျရွေ့လျှားမှုအတွင်း ဈေးကွက် ပြန်ခုန်တက်သည့်အခါ အသုံးပြုပါသည်။ သို့သော် ထိုပြန်ခုန်တက်မှုသည် တစ်ခဏမျှသာ ခံပြီး၊ အကျများသည် ဈေးကွက်ကို လျှင်မြန်စွာပြန်လည်ရယူပါသည်။ ဈေးကွက် အထက်တက်လိုက်၊ အောက်ကျလိုက်ဖြစ်နေစဉ်၊ မတူညီသော retracementများ၏ ပုံစံများသည် အမြဲဖြစ်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သော ထက်မြက်သည့်ရောင်းဝယ်သူများမှ ဝင်ငွေရရန် ဤအနေအထားကို အသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။
အစပိုင်းတွင် သင်သည် ထိုကဲ့သို့ ပြန်ကန်ထွက်လာမှုအား တကယ့်ဈေးလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမှုမှ ခွဲခြားတတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်နိုင်မည်ဟူသည့် ညွှန်ကြားချက်အတိုချုပ် ဤမှာပါ။
- လက်ရှိဈေးလမ်းကြောင်းကို သတိပြုပါ။အားကောင်းပြီး အကျဆန်သော ဈေးလမ်းကြောင်းသည် အချိန်အတော်ကြာခံပါသည်။ အကျလမ်းကြောင်း မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ရမလဲ ဒီမှာ သင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
- ဈေးကွက်ရှိ လာမည့်ဖြစ်ရပ်များကို သိပါ။
ဗဟိုဘဏ် (ဥပမာ၊ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်)မှ အရေးကြီးကြေညာချက်ရှိပါက (သို့) ဈေးအကျလမ်းကြောင်းအတွင်း အရေးပါသည့်သတင်းများရှိပါက၊ တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်မတ်လာမှု၏ ရုပ်သွင် ဖြစ်နိုင်ဟန်ရှိသည်။
- နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများကို အာရုံစိုက်ပါ။
ဈေးနှုန်း၏ လက်ရှိဦးတည်ရာကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးမည့် ဈေးလမ်းကြောင်း အညွှန်းကိန်းများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် parabolic SAR, Bollinger bandများ, စံသွေဖည်ခြင်း, ADX နှင့် ပျမ်းမျှအရွေ့ (MA)များပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အား မည်ကဲ့သို့မှန်ကန်စွာ အသုံးချရမည်ကို Forex လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် oscillator အညွှန်းကိန်းများသည် ဈေးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုကို အချက်ပြနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အရောင်းလွန်ဇုန်အတွင်းသို့ RSI ကျသွားပါက၊ ဈေးနှုန်းအထက်တက်ရန် မျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်။ဤအခြေအနေအချို့ မဆုံဖြစ်ခဲ့ပါက၊ သင်သည် တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသောပြန်မတ်လာမှုဟု လူသိကြသည့် ဈေးပြောင်းပြန်ဖြစ်မှု အတုအယောင်နှင့် ကြုံနေရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်မတ်လာမှုအား ရောင်းဝယ်ခြင်း
တိုတောင်းပြီးမထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုကို ဖော်ထုတ်သောအခါ၊ အတွဲသည် ထိုခုန်တက်မှုမတိုင်မီ နောက်ဆုံးအောက်ခြေအဆင့်ကို ချိုးဖောက်သွားသောအခါ ရေတိုအနေအထားဖွင့်ရန်လိုပါသည်။ သင်သည် ဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်ရန် အချိန်ကိုက်ကို ကျော်သွားနိုင်သည့်အတွက် ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုအား အာရုံစိုက်ထားရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
အောက်တွင် တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်းဗျူဟာကို ညွှန်ပြခဲ့ပါသည်။၁။ အားကောင်းသော အကျ ဈေးလမ်းကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပါ။
၂။ ဈေးလမ်းကြောင်း အညွှန်းကိန်းမားကို ဆန်းစစ်ပါ: parabolic SAR နှင့် Bollinger bandများသည် အတွဲအတွက် အကျဈေးလမ်းကြောင်းကို ပြပါက၊ ၎င်း ဆက်သွားနိုင်သည်။
၃။ ဈေးနှုန်းအား ဈေးလမ်းကြောင်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်ပြီး၊ တက်သွားရန်စောင့်ဆိုင်းပါ။
၄။ အကျဈေးလမ်းကြောင်းကာလအတွင်း ဈေးပြောင်းပြန်ဖြစ်မှု ဖြစ်ပေါ်ပေမယ့် အညွှန်းကိန်းများးသည် အကျဈေးကွက်ကို အချက်ပြသောအခါ၊ ဈေးနှုန်းကျသွားရန် စောင့်ဆိုင်းပါ။
၅။ တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုမဖြစ်ခင် နောက်ဆုံးအောက်ခြေ၏ အဆင့်ကိုမှတ်သားပါ။
၆။ Candleမှ နောက်ဆုံးအောက်ခြေ အောက်နားတွင် ပိတ်ပါက၊ ၎င်းသည် တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုကို အတည်ပြုပြီး၊ ရေတိုအနေအထား ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
၇။ Stop lossများအကြောင်း မမေ့ပါနဲ့! အတက်(bull)များသည် ဈေးကွက်ကို လွှန်သွားပါက၊ ဈေးနှုန်းသည် ရှေ့ဆက်ထက်တက်မှာဖြစ်ပြီး၊ သင်ငွေဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ၎င်းအား ယခင်အမြင့်အထက်တွင် ထားပါ။
၈။ အကျဘက် ဖိအား ဆက်လက်မဖြစ်ခင်အထိ ဈေးကွက်တွင်နေပါ။
EUR/USD၏ ၄နာရီ ဇယားကို ကြည့်ရအောင်။ ဒီမှာ အကျဈေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သော်လည်း၊ အတွဲအတွက် ဈေးနှုန်းသည် တက်သွားခဲ့ပြီး၊ ဈေးလမ်းကြောင်းမျဉ်းတန်းကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် parabolic SARသည် ဈေးပြောင်းပြန်သာမက Bollinger bandများကိုလည်း အချက်မပြပါ။ RSIအား ဈေးလမ်းကြောင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည့် အလည်တွင် ထားခဲ့ပါသည်။ အတွဲသည် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအနိမ့်အား ၁.၁၄၉၉ အောက်ကျသွားခဲ့ပါက၊ တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်ခုန်တက်မှုဖြစ်မည်ဟု အတည်ပြုပြီး၊ ထိုအဆင့်တွင် အော်ဒါအတိုလေးတစ်ခု ထားနိုင်သည်။ တပြိုင်တည်းမှာပင် ၁.၁၅၄၁တွင် နောက်ဆုံးအမြင့်အထက်တွင် stop-lossအော်ဒါ ထားခဲ့သည်။
သတိပြုပါ၊ အမှန်တကယ် ဈေးပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုနှင့် ကြုံရနိုင်ပါသည်။ AUD/USD နေ့စဉ်ဇယားအောက်တွင်၊ ဈေးနှုန်းခုန်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် အတက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကျ candlestickနှင့် ယခင်အောက်ခြေထက် ပိုနိမ့်ရာကို ဆွဲခဲ့သည့်အတွဲရှိသော်လည်း၊ ဈေးကွက်သည် ဈေးလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့သည်။ RSI ကိုကြည့်ပါက၊ ၎င်းသည် အရောင်းလွန်ဇုန် အနီးသို့ ကျသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်ရှိ သင့်ရှေ့ဆက်အဆင့်များအား ပိုပြီးသေချာစွာသုံးသပ်ရန် အကြံပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ အနေအထားအတိုတစ်ခု ဖွင့်ခဲ့ပါက၊ ၀.၇၀၆၉ရှိ ထိပ်အထက်နားတွင် ထားခဲ့သည့် stop lossသည် ကံမကောင်းသော ရလဒ်မှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
မှတ်စု: "အချိန်သည် ငွေဖြစ်သည်" ဟူသော စကားရပ်သည် ယခုလိုဗျူဟာအတွက် အလွန်သင့်လျော်သည်။ ဈေးကွက်အား အချိန်ကိုက်တွင် မဝင်ရောက်ပါက၊ သင်သည် ကြီးမားသည့် အရောင်းအဝယ် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်မတ်လာမှုသည် ပရိယာယ်များနိုင်ဟန်ရှိသည့်အတွက် ဤအခြေအနေအတွင်းမှာ အထူးသတိပြုပြီး ရောင်းဝယ်သင့်ပါသည်။ သင်လိုက်နာရမည့် အဓိကအကြံပေးချက်မှာ စိတ်ရှည်သည်းခံရန်လိုခြင်းနှင့် ဇယားတွင် အတည်ပြုချက်များစွာအတွက် စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။
forex ကုနျသှယျ အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ trend အရောင်းအဝယ်